» दमदार आवाज, जसले चारैजना कोचलाई आफुतर्फ फर्काए, भाग ५ (भिडियो)
दमदार आवाज, जसले चारैजना कोचलाई आफुतर्फ फर्काए, भाग ५ (भिडियो)
२ आश्विन २०७६, बिहीबार २०:३६
चन्द्र घलान, मकवानपुर, ०२ असोज । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यो अडिसनको १० औँ भाग प्रसारण भईसक्दा अब ब्लाईन्ड अडिसनका केबल २ एपिसोडहरुमात्र बाँकी छन् । १० औँ एपिसोड प्रसारण भईसक्दा ५४ जना सहभागीहरु ब्याटलका लागि छानिसकिएका छन् भने ५४ मध्ये १९ जनाले चारै जना कोचहरुलाई आफुतिर फर्काउन सफल भएका छन् । साथै १५ जना सहभागीहरु ब्लाईन्ड अडिसनबाट बाहिरिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको चौथो भागसम्म हामीले चारै जना कोचहरुलाई फर्काउन सफल १६ जना प्रतिभाहरुका बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । यस भिडियो सामग्रीको पाँचौँ भागमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल थप ३ प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
विनय कार्की, हेटौँडा, मकवानपुर–बोल्नमा केही समस्या भएता पनि सुरिलो स्वरका धनी विनय कुमार कार्कीलाई धेरैले विनय केटु भनेर पनि चिन्छन् । सिजन्स ब्याण्डका चर्चित भोकलिष्ट सुजिल कर्मचार्य लगायतका ब्याण्ड पर्फोमेन्सबाट प्रभावित भएका विनयले कुन समयबाट आफुले गीत गाउन रुचि बढाए त्यो उनी पनि भन्न सक्दैनन् । अर्थात उनी गीतसँगीतमा प्रभावित भएदेखि नै गाउने भएका हुन् । प्रमोद खरेललाई फेभरेट कोच बताउने विनय चर्चित गायककै रुपमा समेत स्थापित छन् । मकवानपुरको हेटौँडा निवासी विनयले आफ्नै आवाजमा समेत धेरै गीतहरु रेकर्ड गराईसकेका छन् । ३५ वर्षीय विनयले ब्लाईन्ड अडिसनमा सुजिलकै ‘भुमो’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाज सुनेर चारै जना कोच उनीतिर फर्किएका थिए । उनी कोच दिपको टिममा छन् ।
विमोचना लम्जेल, दार्जिलिङ–सुरुदेखि नै साँगितिक परिवारमा हुर्किएकी विमोचना चर्चित लोक गायिका डेजी बराईलीकी छोरी हुन् । उनका बुवा पनि चर्चित संगीतकार हुन् । सन् २००६ मा ‘पलेटी’ कार्यक्रममा आमाबुवासँगै गीत गाउन काठमाडौँ आएकी विमोचनाले सँगीतमा नै जीवन डोराउने लक्ष्य राखेकी छिन् । सँगीत कक्षा सँगै औपचारिक अध्ययन समेत गरिरहेकी उनी आमाबुवाकै बाटो पछ्याउन चाहान्छिन् । उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘भैँसी लड्यो है माया’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनकी आमा चर्चित गायिका डेजी बराईलीको यो गीत गाउँदा चारै जना कोच उनीतिर फर्किए । डेजीको सुरिलो आवाजमा ४४ बर्ष अगाडि रेकर्ड भएको यो गीत विमोचनाले आफ्नै आवाजमा गुञ्जाएकी थिईन् । भ्वाईसको मञ्चमा ४४ वर्ष पछि डेजी आफैले पनि यो गीत गाईन् । विमोचना कोच प्रमोदको टिममा छिन् । आदरणीय दर्शकबिन्द तपाईको विचारमा यी प्रतियोगीहरुमध्ये कसले फाईनलसम्मको यात्रा तय गर्छ जस्तो लाग्छ ? तपाईलाई कसको आवाज सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । साथै यस भिडियोका अन्य भागहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला । भिडियो राम्रो लागेमा यस च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न पनि नभुल्नुहोला ।
दमदार आवाज, जसले चारै जना कोच फर्काए Part 4